Tranonkala “Dindo” Manampy Ny Tiorka Ho Afaka Miditra Indray Amin’ny Wikipedia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2017 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Ελληνικά, বাংলা, Italiano, Français, македонски, русский, Deutsch, Español, English
Ny pejin'ny Wikipedia amin'ny teny anglisy tamin'ny 18 Janoary 2012, naneho ny fampikatsoana iraisampirenena nataony ho fanoherana ny lalàna SOPA sy PIPA momba ny fizakàmanana tao Etazonia. Noforonin'ny Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
Efa ho volana iray mahery izao i Tiorkia no nibahana ny Wikipedia, ilay tahiry fanovozam-pahalalàna malaza indrindra. Isanandro, dia lasa mibaribary hatrany hatrany ny anjara andraikitra tazonin'ilay sehatra amin'ny fanampiana ireo mpampiasa azy hahita sy hizara torohay ety anaty aterineto.
Mitolona ao anatin'ilay fibahanana daholo, na mpianatra, na mpitatitra vaovao na ireo mpankafy andian-tantara amin'ny fahitalavitra. Raha efa zatra nampiasa ireo fitaovana fialàna amin'ny sàkana ireo Tiorka mpahay teknolojia rehefa miditra aminà votoaty nosakànana — nisy lahatsoratra navoakan'ny New York Times tsy ela akory izay nitatitra hoe i Tiorkia no mitàna ny laharana fahatelo eto amin'izao tontolo izao amin'ny fampiasàna be indrindra ny VPN — tsy tafiditra anatin'io sokajy io ireo marobe efa mpampiasa hatrizay ny Wikipedia.
Na efa hatramin'ny 2008 aza i Tiorkia no nibahana lahatsoratra avy ao amin'ny Wikipedia, araka ny nanamarihan'ny tatitra iray vao haingana avy amin'ny Berkman Klein – Ivontoerana ho an'ny Aterineto & Fiarovana ao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard – dia mifanaraka amin'ny fepetra fanivànana aterineto efa tafapetraka ara-dalàna hatramin'ny 2007 ireny fibahànana ireny, fony nolaniana ilay Lalànan'ny Aterineto (Laharana faha-5651). Miaraka amin'ilay fibahanana manontolo ny Wikipedia, lasa laharana faharoa fotsiny amin'ireo firenena fantatra eto ambonin'ny tany fa mibahana ny Wikipedia i Tiorkia, aorian'i Shina.
Na mitoetra ho voasakana aza ilay sehatra, marobe ireo tranonkala “dindo” no noforonina — tranonkala narafitra hamerina ireo votoaty avy ao amin'ny Wikipedia, izay tsy tapaka ampanarahana ny zavamisy. Vahaolana iray tahàka izany ny avy amin'ny IPFS (na Inter-Planetary File System) rehefa napetrak'ilay sehatra ho ao amin'ny tambajotra tsy mialonjafy sy “tsy misy tombo sy hàla” an-dry zareo daholo ny Wikipedia Tiorka, izay tsy miantehitra fotsiny amin'ny rafitra anaran-tsehatra, ka tena sarotra araka izany ny hampiditra tanteraka azy anaty mason-tsivana. Araka izany dia afaka idirana tsy misy ifandraisany amin'izay fandraràn'ny fanjakàna ny votoaty ao.
Anaty lahatsoratra iray ao amin'ny bilaoginy, nosoritsoritan'ny IPFS ny ezaka nataony:
Rehefa nandre ny vaovao [momba ny fibahanana ny Wikipedia], novelominay indray ny ezaka hametrahana pikantsarin'ny Wikipedia ao amin'ny IPFS, mba hahafahan'ny olona mamaky azy io amin'ny fomba tsy mialonjafy sy miparitaka. Afaka manampy ny olona io, farafahakeliny, mba hijery ireo votoaty rehetra ao amin'ny Wikipedia, na tsy afaka ho tonga any amin'ny tena Wikipedia.org aza izy ireo.
Ny IPFS ihany koa dia nanindry mafy fa ezak'izy ireo manokana no nanaovany azy io, tsy niankinany tamin'ny Wikimedia Foundation, ary izay navoakan-dry zareo ao dia pikantsary, fa tsy dika mivantana sy haingam-pihetsika toy ny ao amin'ny Wikipedia tena izy.
Na izany aza, nandray anjara tamin'ireo ezaka ho fialàna amin'ilay sàkana ny Wikimedia. Cristian Consonni avy amin'ny Wikimedia ao Italia no namorona ny tr.vikiansiklopedi.org, tranonkala dindo iray amin'ny Wikipedia, sy ny WikiMirror, tetikasa manana loharano misokatra afaka ampiasain'ny tsirairay hampiantranoany ireo tranonkala dindo mitovitovy amin'izany raha toa ka sanatria mibahana ny Wikipedia ny firenena misy azy ireo.
Ao anatin'ny rakipeon'i Panigrahi ‘Tafa Malalaka’, nambaran'i Consonni tamin'i Subhashish Panigrahi, mpandray anjara ato amin'ny Global Voices no sady Mpanentana ny Vondrom-piarahamonina Mozilla ao Azia ny momba ny fametrahana dindon'ny Wikipedia. Ity ambany ity ny fantina fohy avy amin'ny resaka nifanaovan-dry zareo:
Tsy dika fenon'ny ‘proxy’ ny dindo. – miditra aminà rohy hafa ianao, izay tsy ilay rohy mahazatra ary izay hitanao avy eo dia nalaina avy ao amin'ny Wikipedia. Ny zavadehibe dia entin'ny lohamilina ny fangatahanao ho any amin'ilay tena Wikipedia mba hahafahanao mahita azy io na dia ao Tiorkia aza ianao, toerana izay mibahana ny Wikipedia, satria izay asa izay dia lohamilina tsy mipetraka ao Tiorkia no manao azy. Ny fametrahana dindo dia iray amin'ireo fomba mora indrindra hanaovana izay hahazoan'ny olona ny votoaty Wikipedia.